Wasaaradda waxbarashada oo dugsi ka furtay Cadale | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda waxbarashada oo dugsi ka furtay Cadale
Wasaaradda waxbarashada oo dugsi ka furtay Cadale
Wasaaradda waxbarashada Xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa degmada Cadale ee gobolka Shabeela dhexe waxaa ay ka hirgalisay dugsi hoose iyo dhexe kasoo ay wax ka baran doonaan carruurta Soomaaliyeed ee ku nool degmadaasi.
Iskuulka oo ka kooban dugsi hoose iyo dhexe isla markaana si lacag la’aan ah wax loogu bari doono caruurta degaanka ayaa laga hirgaliyay magaalada Cadale ee gobolka Sh/dhexe oo aan hore u laheyn goobo waxbaarsho tan iyo bur burkii dowladii dhexe,waxaana dhismaha dugsigan iska kaashaday Midowga Yurub iyo hay’adda ADRA oo ka shaqeysa horumarinta waxbarashada oo gacan ka helaya wasaaraaradda waxbarashada dowladda federaalka ah.
Waxaana munaasabadda furitaanka dugsiga ay ka qeybgaleen mas’uuliyiin ay kamid yihiin Wasiirka Waxbaarshada dowlad goboleedka Hirshabelle,gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Sh/dhexe maamulka degmada Cadale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool halkaasi.
Guddoomiyaha degmada Cadale Muxudiin Suudi Macalin oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dadka ku nool degmada ay si weyn uga faa’iideysna doonaan iskuulka loo furay oo ah mid si lacag la’aan ah wax looga baranayo.
Dhanka kale Wasiirka Waxbarashada Dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdulaahi Abuukar Sheikh ayaa xusay in horumarinta iyo dhiirigelinta waxbaasrhada ay qeyb tahay waxyaabaha uu mudnanata siinayo maamulka Hirshabelle.
Previous articleWasiir ku xigeenkii hore ee Xanaanada Xoolaha oo baaq u diray dhinacyada ku dagaalamay Xeraale
Next articleIn kabadan 100 maxaabiis ah oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho